Siriki Kurara | Anoshamisa Kugadzira Uye Yekutengesa Kambani Limited
Silk Ziso Mask
Satin Ziso Mask
Velvet Ziso Mask
Silk Dhinda Scarf
Poly Dhinda Scarf
Silk Rakasonererwa Mutsipa Case
Poly Rakasonererwa Mutsipa Nyaya
Nyowani Mufashoni Dhizaini Bandana
Solid Ruvara Banada
Siriki Kurara zvipfeko
Hot Kutengesa Type
tsika yakashongedzwa logo
tsika yekuwacha chitaridzi
tsika kudhinda dhizaini
Zvinorevei 6A kune 100% mulberry sirika jira?
Kazhinji, zvigadzirwa zvesilika zvinokosheswa paA, B, C. Nepo Giredhi A iri rakanakisa pane ese ane mhando yepamusoro, Giredhi C ndiro rakaderera. Giredhi A silika yakachena kwazvo; inogona kuburitswa kune hurefu hwakareba pasina kutyora.
Saizvozvowo, zvigadzirwa zvesilika zvakaiswawo muzviverengero izvo zvinotora iyo yekuisa system nhanho kuenda kumberi.
Semuenzaniso, unogona kuve ne3A, 4A, 5A, uye 6A.
6A ndiyo yakakwira uye yakasarudzika mhando sirika. Izvi zvinoreva kuti kana iwe ukaona chigadzirwa chesilika chakashongedzwa 6A, ndiyo yepamusoro mhando yerudzi irworwo.
Uye zvakare, silika ine Grade 6A inodhura zvakanyanya nekuda kwehunhu hwayo kupfuura iyo inobva kugiredhi 5A sirika. Izvi zvinoreva kuti sirika pillowcase yakagadzirwa kubva kuGrade 6A sirika inodhura zvakanyanya nekuda kwesiriki yemhando yepamusoro yakashandiswa pane pepilato rinogadzirwa kubva kuGrade 5A sirika.
Chii chaunofanirwa kuita usati watenga silika yekurara?
Ruvara kupera ndiyo imwe yezvikonzero nei vamwe vagadziri vachirasikirwa nevatengi vavo. Kana chii chaunotarisira kubva kumutengi asina kuwana kukosha kwemari yake? Iko hakuna nzira yaanogona kudzokera kune mumwechete mugadziri kune wechipiri kutenga.
Usati wawana machira esirika ekurara, bvunza wako anogadzira kuti akupe iwe bvunzo mushumo weiyo colorfastness yemucheka wesilika. Ndine chokwadi chekuti hauzodi jira resilika rinoshandura ruvara mushure mekuwacha kaviri kana katatu.
Laboratory mishumo ye colorfastness inoratidza kuti yakasimba sei machira zvinhu.
Rega nditsanangure muchidimbu kuti kutsanya kwemavara ndeipi nzira yekuyedza kusimba kwejira, maererano nekukurumidza kwarinogona kuita kumarudzi emhando dzinodzika
Semutengi, kunyangwe mutengi akananga kana mutengesi / wekutengesa, zvakakosha kuti iwe uzive kuti jira resilika raunorara rauri kutenga rinoita sei nekuwacha, kuayina, uye kupenya kwezuva. Uyezve, colorfastness inoratidzira machira 'mwero wekurwisa ziya.
Unogona kusarudza kukanganwa zvimwe zvechirevo kana iwe uri mutengi akananga. Nekudaro, kuita izvi semutengesi kunogona kumisikidza bhizinesi rako paslip pasi. Iwe neni tinoziva izvi zvinogona kudzinga vatengi kure newe kana micheka ikashata.
Kune vatengi vakanangana, sarudzo yekuti urege kuteerera mamwe anokurumidza mushumo ruzivo zvinoenderana nezvakarongedzerwa zvemucheka.
Heino kubheja kwako kwakanyanya. Usati watumirwa, ita shuwa kuti chii chiri kugadzirwa nemugadziri chinosangana nezvido zvako kana zvinodiwa nevatengi vako zvaungave zvichidaro. Nenzira iyi, haufanire kunetseka nekuchengetwa kwevatengi. Kukosha kwakakwana kukwezva kuvimbika.
Asi kana iyo bvunzo mushumo isipo, unogona kumhanya nekuzviongorora pachako. Kumbira chikamu chemucheka wauri kutenga kubva kumugadziri uye geza nemvura yakasangana nemvura yegungwa. Mushure meizvozvo, chengetedza nesimbi inopisa yekuwachira. Zvese izvi zvaizokupa iwe pfungwa yekuti yakasimba sei iyo silika zvinhu zvekurara zvipfeko zviri.
Sirik zvinhu zvinogara, zvisinei, zvinofanirwa kubatwa zvine hungwaru. Kana imwe yehembe dzako ikadzima, unogona kuiita nyowani nekutevera chero nzira dzambotaurwa.
KUSVIRA KUSVIRA KUSVIRA KWEMAvara KUNAKA? ? ？
Pls tarisa iyo SGS bvunzo mushumo kubva kwatiri. Kuchengetedza ruvara kupera.
Tingakubatsira Sei Kuti Ubudirire?
Yakakomba kubva mbishi materais kune yese kugadzirwa maitiro, uye zvakanyatso tarisa bheji rimwe nerimwe risati rasununguka
Yakagadziriswa Service Yakadzika MOQ
Zvese zvaunoda kuti tizive zano rako, uye isu tinokubatsira iwe kuti uzviite, kubva pane dhizaini kune chirongwa uye kune chaicho chigadzirwa. Chero bedzi painogona kusonwa, tinogona kuzviita.And MOQ inongova 100pcs chete
Yemahara Logo, Chiraira, Package Dhizaini
Ingotitumira logo yako, chitaridzi, dhizaini dhizaini, isu tichaita iyo mockup kuitira kuti iwe ugone kuve nekuratidzwa kugadzira iyo yakakwana sirika mutsago, kana zano ratinogona kukurudzira
Muenzaniso Kuratidza mumazuva matatu
Mushure mekusimbisa mifananidzo, tinogona kuita mharidzo mumazuva matatu uye kutumira nekukurumidza
Mazuva 7-25 Mazuva Dhirivhari yakawanda
Kune yakasarudzika yenguva dzose sirika mutsamiro kesi uye huwandu pazasi pezviuru zvidimbu, nguva yekutungamira iri mukati memazuva makumi maviri kubva pakurongeka.
Amazon FBA Sevhisi
Zvakafuma ruzivo muAmazon Operation Maitiro UPC kodhi yemahara kudhinda & kugadzira kunyorera & Mahara HD mapikicha
Adress:Kwete 88 Xingwang Street, Shengzhou, Shaoxing, Zhejiang, China